Chii chaunofanira kutarisa kana uchihaya webhu inomiririra yako domains | ECommerce nhau
Chii chekutarisa kana uchihaya webhu inomiririra
Kana iwe uri kufunga hire a Hosting kune yako webhusaiti, Pane zvinhu zvakati wandei zvekutarisa kana iwe uchida kuwana yakanakisa webhu inomiririra. Uine sarudzo dzakawanda dziripo zvinonetsa zvakare kuziva chaizvo kuti ndeipi yaunofanira kusarudza. Tinokuudza pazasi peizvozvo iwe unofanirwa kutarisa kune webhu yekutambira kuti uwane mhinduro dzakanakisa.
2 Domains akasununguka
4 Uptime Guarantee
Bvunza iyo Kubata mupi kuti ndeupi rudzi rwekutsigira vatengi kwavanopa. Zvakaipisisa zvinogona kuitika ndezvekuti webhusaiti yako yakadzika uye haugone kuwana mhinduro kubva kutsigiro rehunyanzvi. Nekudaro, funga nezve makambani ayo anopa mahara 24/7 rutsigiro, rutsigiro mumutauro wako, pamwe nenzira dzakasiyana dzekuonana.
Tsvaga zvakare if iyo inobata kambani inokutendera kuti uve nemamwe mazita echizinda. Mazhinji makambani anotenga mamwe madomeni akafanana uye zvinonyanya kuitisa zvese kubva kune yakabatana control panel kuti isarasikirwe netraffic yese.
Uyezve ita shuwa kuti iwe Yekugamuchira mupi anokupa ekuchengeta makopi ewebhusaiti mafaira. Tsvaga kuti ndeapi marongero avanopa maererano nefaira kudzoreredza, kangani ku backup mafaira, nezvimwe.
Chinhu chekupedzisira chaunoda ndechekuti vashanyi vako havagone kuwana yako saiti nekuda kwekusaita basa matambudziko. Sezvineiwo, saka, iwe unofanirwa kusarudza mupi anokupa 99% kana kupfuura kushanda. Uyezve tarisa izvo sevha ine nzvimbo dzakawanda dzekuchengetedza.
Pakupedzisira, ita shuwa kuti iyo yekutora yaunosarudza inokutendera iwe kuti uwane iyo server saka unogona nyore kugadzira maemail account, kuita shanduko kumaseva marongero, nezvimwe. Ita shuwa kuti iwe unokwanisa kuwana pamhepo kutenga email kana iwe usiri kure nekombuta yako uye kana pakaita emergency.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Chii chekutarisa kana uchihaya webhu inomiririra
Maitiro ekugadzira zvinokwezva zvinopihwa zveEcommerce vatengi
Maitiro ekugadzira zvemhando yepamusoro zvemukati kune yako Ecommerce